Maxaad noo doorataa? - Chengdu Action Electronics Joint-Stock Co., Ltd.
● Qalabka wax soo saarka ee Hi-Tech
Qalabkayaga wax soo saarka ee asaasiga ah waxaa si toos ah looga keenaa Japan (Panasonic iyo Omron) iyo Jarmalka (KUKA).
● Xoog R&D xoogan
Dhamaadka 2020, Action waxay leedahay 58 xuquuq daabacaadda software, 55 shatiyo.
Waxaan xaruntayada R&D ku leenahay 37 Injineer, dhamaantood waa Postgraduate ama ka sareeya Jaamacadda Sayniska Elektrooniga iyo Injineerinka Shiinaha.
● Isweydaarsiga & Iskaashiga
Hawlgalka shaqaalaha iyo saldhigga tababarka ee cabbirka qaranka.Mid ka mid ah 20ka shirkadood ee caanka ah ee Shiinaha IoT-ga tignoolajiyada.Chengdu gaaska ogaanshaha xarunta cilmi baarista farsamada.Waxaan nahay alaab-qeybiyaha fasalka koowaad ee CNPC, Sinopec, CNOOC, iwm.
● OEM & ODM waa la aqbali karaa
Summada la habeeyey, cabbirrada iyo qaababka ayaa diyaar ah.Ku soo dhawoow inaad nala wadaagto fikradaada, aynu ka wada shaqayno si aan nolosha uga dhigno mid hal abuur leh.
● Taageerada qaybiyeyaasha
Waxaan soo dhaweyneynaa qaybiyeyaasha adduunka oo dhan inay nagu soo biiraan oo ay bixiyaan taageero farsamo.
● Xakamaynta tayada adag
● 1.Maaddada Ceyriinka Xudunta u ah.
Qaybahayaga asaasiga ah: dareemayaasha waxaa si toos ah looga keenaa Japan, UK, Switzerland iyo Germany, iwm dalka Yurub;.
2. Nidaamka maaraynta tayada sayniska
Laga soo bilaabo samaynta heerarka tayada ilaa alaab-qeybiyaha ilaalinta tayada;laga bilaabo naqshadeynta iyo horumarinta si loo xaddido baaritaanka shaybaarka, ku qiyaas tayada badeecad kasta xog sax ah;
3. Wuxuu qaataa hab maamulka macluumaadka hab-socod buuxa
Qaado hogaanka qaadashada nidaamka fulinta wax soo saarka warshad horumarsan (MES: Nidaamka Fulinta wax soo saarka) ee warshadaha.Laga soo bilaabo iibka alaabta ilaa wax soo saarka, laga soo bilaabo kormeerka ilaa badeecada ugu dambeysa, tallaabo kasta oo keenis ah ayaa loo raadin karaa si sax ah.Iyo nidaamka xogta-waqtiga dhabta ah si loo hagaajiyo maamulka tayada iyo maaraynta wax soo saarka;
● 4. Nidaamka wax soo saarka si toos ah oo dhammaystiran
Khadka wax-soo-saarka otomaatiga ah oo dhammaystiran, nidaamka gabowga otomaatiga ah, nidaamka qaybinta gaaska otomaatiga ah, nidaamka cabbirka tooska ah ee hogaaminaya warshadaha, heerarka ogaanshaha saxda ah ilaa heerka micron.
● 5. Tijaabinta Alaabooyinka Dhammaaday
Alaarmiga gaaska gubanaya, gaaska ololi kara, qalabka gaaska, Shiine gaaska baadhe, lpg gaaska ogaanshaha, qalabka gaaska go'an,